TCDD YHT si aad u Iirto Mashiinka Qalabka | RayHaber | raillynews
HomewarbaahintaQalabka TCDD ee loo yaqaan 'TCDD YHT Machinist to Buy.'
TCDD gudahood markii lagu dhawaaqayay la daabacay
18 farsamo yaqaan Chief,
120 farsamo yaqaan wagon,
20 Injineerka loo yaqaan 'YHT injineer,
3 darawalka adeega
shaqaalaha waa la aasaasay.
DHMİ XAALADAHA GAARKA AH
DHMI ayaa ku dhawaaqday warkan
150 Maareeyaha Gaadiidka Hawada,
64 Sarkaalka ARFF,
100 Sarkaalka AIM,
70 Sarkaal Apron,
30 Howl wade kumbuyuutar,
34 Shaqaalaysiinta Injineerada,
90 qorista farsamayaqaannada
40 farsamo yaqaan
soo dhaweyn loo sameeyo.
MUXUU YAHAY GAARKA?
Kuwa doonaya inay makaanik yihiin; - U adeegsan kara indhaha iyo cagaha isuduwidda, - Jawaab si dhaqso leh u kiciya, - Waxyaalo badan dareemi kartaa waqti go'an, - taxaddar, mas'uul, dhiig qabow, - Kala sooci kara midabbo, - Kicinta caafimaadka maskaxda, - Farxadda la macaamilka mashiinnada iyo waa inay ahaadaan kuwo farsamo ahaan awood u leh.
Tababarka mashiinka waxaa lagu bixiyaa xarumaha tababarka adeega ee ku xiran Agaasimaha Guud ee Turkiga Railways. Waxaa intaa dheer, ardayda ka qalin-jabisa dugsiyada sare ee xirfadaha waxaa lagu tababarey tababarka shaqada.
Ogeysiiska Qaadashada: Shaqaalaha qalab ee YHT waxay iibsan doonaan dharka
Goorma ayay natiijooyinka soo iibsashada TCDD Machinistka iyo tababarka shaqaalaha?